Warar - 3D Fibreglass-xidhkii Carada
3-D dhismaha spacer-ka waa fikrad cusub oo la soo saaray. Dusha sare ee dharka ayaa si xoog leh isugu xiran midba midka kale iyadoo lagu dhejinayo fiilooyinka xargaha oo isku dhafan maqaarka. Sidaa darteed, dharka 3-D spacer wuxuu ku siin karaa caabbinta maqaarka-jirka ee wanaagsan, adkeysi aad u fiican iyo sharafnimo sarreysa. Intaas waxaa sii dheer, meesha u dhexeysa dhismaha waxaa lagu buuxin karaa xumbo si ay u bixiso taageero isku duubni leh oo isu taagsan.
Dharka '3-D spacer' wuxuu ka kooban yahay laba dusha sare oo dhar ah oo laba-geesood leh, oo si farsamaysan ugu xidhan tiirar duuban oo taagan. Iyo laba tuubbo oo S-qaabeeya ah oo isu taga si ay u noqdaan tiir, 8-qaabeeya jihada fidsan iyo 1-qaabeeya jihada weft.
Isku-darka dharka 3-D spacer wuxuu bixin karaa iska caabbinta maqaarka-maqaarka sare iyo caabbinta saameynta iyo caabbinta saameynta, miisaanka fudud. qallafsanaan sare, kuleyliyaha heerkulka ee aadka u fiican, biyo xireynta acoustic, iyo wixii la mid ah.